Ntopng: Fanaraha-maso fifamoivoizana amin'ny tambajotra manaraka | Avy amin'ny Linux
Ntopng: Monitor amin'ny fifamoivoizana amin'ny tambajotra manaraka
«Ntopng» dia tsara fanaraha-maso ny fifamoivoizana tambajotra vaovaoizany hoe ilay kinova farany nohavaozina an'ny programa tany am-boalohany fantatra amin'ny hoe «Ntop», noforonin'i fikambanana anglisy mitovy anarana. Orinasa injeniera izay mivoatra manokana rindrambaiko tambajotra avo lenta, ny ankamaroany rindrambaiko open source, maimaimpoana ary ho an'ny asa tsy mitady tombony sy / na fikarohana.
«Ntopng» amin'ny ankapobeny dia a fanadihadiana momba ny fifamoivoizana izay manara-maso ny fampiasana tambajotra. Lavitra, «Ntopng» dia miorina amin'ny «libpcap» (fivarotam-boky voasoratra toy ny ampahany amin'ny programa antsoina hoe lehibe indrindra TCPDump) ary efa nosoratana tamin'ny fomba mora entina mamela azy hihazakazaka amin'ny sehatra rehetra «Unix», «MacOSX», ary koa momba «Windows».
«Ntopng» raha ny tena izy dia izay no omena a interface tsara momba ny mpampiasa intuitive sy encrypted ho an'ny fikarohana fampahalalana momba ny fifamoivoizana amin'ny fotoana tena izy ary ara-tantara. Ka io dia heverina ho dikan'ny fahombiazana avo sy fanjifana harena ambany, vokatra avy amin'ny fivoarana voajanahary an'ny teo aloha «Ntop».
Anisan'ireo tombony maro azo avy amin'ny «Ntop», ankoatry ny tranokalany mahafinaritra sy miasa dia ny fahaizany mampahafantatra ny mpampiasa momba izany protokol tambajotra marobetoy «ARP, ICMP, Decnet, DLC, IPX, Netbios, TCP, UDP» sy ny maro hafa.
1.3.1 Ho an'ny Ubuntu
1.3.2 Ho an'ny DEBIANINA
Asehoy ny fifamoivoizana amin'ny tamba-jotra: Sady mpampiantrano amin'ny fotoana tena izy.
Geolocate sy Overlay Host: Amin'ny sarintany jeografika.
Maotera fanairana: Mba hisamborana mpampiantrano tsy manara-dalàna sy mampiahiahy.
Fanaraha-maso mitohy fitaovana tambajotra: amin'ny alalan'ny SNMP v1 / v2c.
Tunneling protokol de-tunneling: Anisan'izany ny GTP / GRE.
Fakafakao ny fifamoivoizana IP: Handeha hanakilasy azy araka ny loharano / toerana aleha.
Mametraha statistikan'ny fifamoivoizana tambajotra: Mampiasa teknolojia HTML5 / AJAX.
Omeo fanampiana feno ireo protokolan'ny tambajotra ankehitriny: Anisan'izany ny IPv4 sy IPv6.
Tatitra momba ny fampiasana ny protokol IP: Na dia mandeha hatrany amin'ny fanasokajiana azy amin'ny karazana protokolola aza.
Fifanarahana feno miaraka amin'ny protokol Layer 2 (Layer-2): Anisan'izany ny statistikan'ny ARP.
Mamokatra tatitra maharitra amin'ny metrika tambajotra: Anisan'izany ny fampisehoana sy ny fampiharana fampiharana.
Jereo ny lisitry ny tondro lehibe: Ireo mpandaha-teny ambony (mpampita hafatra / mpandray), AS ambony, fampiharana ambony L7.
Tehirizo ny statistikan'ny fifamoivoizana maharitra amin'ny kapila: Mba hamelana ny fikarohana amin'ny ho avy sy ny fanadihadiana aorian'ny fandidiana.
Mampiavaka ny fifamoivoizana HTTP: Manararaotra ny serivisy fitetezana azo antoka nomen'ny Google y Lisitra mainty HTTP.
Alaharo ny fifamoivoizana amin'ny tamba-jotra: Anisan'ireo mason-tsivana maro toy ny IP Address, Port, L7 Protocol, Performance, Autonomous Systems (AS).
Fanohanana amin'ny fanondranana angon-drakitra araha-maso: Mampiasa MySQL, ElasticSearch ary LogStash. Ho an'ny MySQL dia manampy ny fitrandrahana angon-drakitra manan-tantara.
Fikarohana protokol fampiharana: Toy ny Facebook, YouTube, BitTorrent, ankoatry ny hafa, mampiasa teknolojia nDPI (ntop Deep Packet Inspection).
Araho maso ary atreho ny masontsivana momba ny tamba-jotra: Anisan'izany ny fahombiazana mivantana, tambajotram-pifandraisana ary fampiharana, Round Trip Time (RTT), statistikan'ny TCP (retransmissions, fonosana tsy misy serivisy, fonosana very), ary bytes sy fonosana nafindra .
«Ntopng» misy amin'ny kinova telo:
Community: Fampivoarana loharano maimaimpoana sy malalaka (Hosted on GitHub) nahazo alalana tamin'ny GNU GPLv3.
Fanamarihana: Ireo dikan-teny Professional sy Enterprise manolora fiasa fanampiny izay ilaina manokana salantsalany izay na ireo fikambanana lehibe kokoa. Ary ny teny momba ny fananana sy ny fampiasana azy (fepetra na fetra) dia dinihina amin'ny azy avy Fifanarahana fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa farany (Mpampiasa farany Fifanarahana fahazoan-dàlana - UELA).
Ho an'ny Ubuntu
Votoatiny default amin'ny fisie ntopng.conf
Ny atiny novaina tamin'ny fisie ntopng.conf
Fanamarihana: Ny mpifanerasera amin'ny tambajotra ilaina ihany no tokony ampiana (alefa).
Votoatiny default amin'ny fisie ntopng.start
Atsaharo ny serivisy Ntopng
Mihazakazaha tranokala amin'ny alàlan'ny lalana mankany Ntopng
Takelaka fidirana an-tsokosoko
Fanamarihana: Ny solonanarana sy tenimiafina default dia «admin» - «admin»
Efijery lehibe Ntopng
Ho an'ny DEBIANINA
Araka ny hitantsika «Ntopng» dia fitaovana mahafinaritra ho an'ny free software izay manome antsika fahaiza-manao sy tombontsoa tena tsara eo amin'ny haavon'ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana ny solosaintsika. Ho an'ireo izay maniry hampiasa rindranasa mandroso kely noho ny mahazatra handinihana ireo lafiny sasany amin'ny haitao sy ny rafitra miasa amin'ny antsipiriany, «Ntopng» safidy tena tsara ny manandrana.
Raha efa nampiasa izany ianao, zarao aminay ny zavatra tsapa sy zavatra niainanao amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra, mba hiarahanay manatsara ny fahalalana ny iray manontolo Rindrambaiko maimaim-poana sy vondrom-piarahamonina open source.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ntopng: mpanara-maso fifamoivoizana tambajotra manaraka tsara
XFCE 4.16 dingana fampandrosoana manomboka